Fizarana fanampiana mampilahatra vahoaka, filoha midina an-kianja, tsikeram-pitantanana ny ‘covid-19’, fitakiana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fibebahana sy fandraisana andraikitra il y a 5 jours
Rasoanjanahary il y a 5 mois
Mamarana ny 15 andro fahafolo amin’ny hamehana ara-pahasalamana ity herinandro ity. Nisongadina tamin’ny fampitam-baovao samihafa ny fitetezam-paritra nataon’ny delagasiona notarihin’ny filoham-pirenana Andry Rajoelina tato anatin’ny roa herinandro izay. Taorian’ny tany avaratry ny Nosy hatrany Antsiranana, dia tao Antananarivo no nanohizany izany, nanaovana ny fizarana fanampiana ara-tsosialy ho an’ny vahoaka. Nosantarina teny amin’ny kianja Malacam izany ny sabotsy 1 aogositra 2020. Nahitana vary iray lasaka 50kg, menaka 2 litatra, voamaina, ronono am-bifotsy 2 boaty, siramamy, ary CVO. Nambaran’ny filoha Rajoelina teny Itaosy tamin’ny 4 aogositra fa hahazo daholo izay manana karinem-pokontany ary tsy ekena intsony ireo tompon’andraikitra amin’ny fokontany manodinkodina sy manavakavaka. Efa heno sy hita daholo ny lesoka tamin’ny voalohany ary harenina izany raha ny nambaran’ny filoha. Nitrangana savorovoro sy taraina manko tamin’ny toerana maro toy ny teny Ankazomanga, Andraisoro, Ilafy ary Itaosy. Anisan’ny nambaran’ny filoha indray koa tamin’io fotoana io ny fanatanterahana ny ‘digitalisation’ momba ny mponina any anivon’ny fokontany, hahazoana karatra nomerika ahitana mazava ny momba ny isan-tokantrano ; tamin’ny volana aprily izy no efa nanambara ny momba io ary hanatanteraka izany haingana.
Nisongadina tamin’ny haino aman-jery tsy miankina samihafa ihany koa tamin’iny herinandro iny sy fiandohan’ity herinandro ity ny fanambarana samihafa avy amin’ny sokajin’olona maro toy ny avy amin’ny RMDM (Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara), mikarakara fikaonan-doha momba ny fitantanana ny raharaham-pirenena izay ambaran’izy ireo fa misy lesoka maro, voatondro ho ny 10 aogositra no hanaovana izany. Ao ihany koa ny firaisamonim-pirenena sy mpanao politika mitsikera ny fomba fitantanan’ny fitondram-panjakana izay isian’ny fifanoheran-javatra amin’ny fisorohana ny tsy hihanahan’ny aretina ‘covid-19’. Takian’izy ireny ny mangaraharaha amin’ny fampiasana ny volam-bahoaka sy indramina amin’ity ady atao amin’ny ‘covid-19’ ity. Fony tany Mahajanga sy Nosy Be ary Antsiranana dia anisan’ny nataon’ny filoha tany ny fanomezana tamby ireo mpiasan’ny fahasalamana misahana ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana momba ity ‘covid-19’ ity. Ho an’ny ao Antananarivo, dia misy ny tarainan’ireo ao amin’ny hopitalim-panjakana sy hatreny amin’ny CMC Andohatapenaka ho tsy mbola nahazo izany tamby izany, araka ny fampitam-baovao tamin’ny haino aman-jery tsy miankina tamin’ity herinandro ity. Eo ihany koa ny tsy fahampian’ny fitaovana enti-miasa na EPI.
Mitohy hatrany kosa ny fanomezana ny isan’ny trangan’ny ‘covid-19’ ao amin’ny TVM sy RNM ary ireo haino aman-jery tsy miankina isaky ny tolakandro. Ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle hatrany no mpitondra teny ofisialy amin’izany. Amin’ny 1 ora moa no voalaza fa hanaovana azy io fa miovaova izany, matetika manodidina ny amin’ny 1 ora sy sasany. Misy ny fanazavana sy fanentanana entin’ireo tompon’andraikitra samihafa, sy dokam-barotra amin’ny fanafody ‘covid-organics’ na CVO. Efa manakaiky ilay 1000 isan’andro ny fitiliana PCR sy Genexpert atao hatramin’ny nitombon’ny laboratoara manao ny fitiliana. Misy ny sitrana an-jatony isan’andro, torak’izany koa ny tranga vaovao, ary ny maty izay 127 hatramin’ny 5 aogositra 2020. Nambaran’ny Profesora tamin’io andro io fa eo amin’ny 80% amin’ireo mitondra ny tsimokaretina ny tahan’ny fahasitranana, ary 1% eo ho eo ny tahan’ny fahafatesana.
Mbola ho lava ny ady raha ny nambaran’ny tale jeneralin’ny OMS tamin’ny fampitam-baovao iraisam-pirenena, ary misy aza ireo firenena voatery niverina indray amin’ny fihibohana noho ny firongatry ny tratran’ny tsimokaretina. Mananika ny 18 tapitrisa ireo tratran’ny tsimokaretina tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity, maherin’ny 10 tapitrisa no sitrana ary maherin’ny 680 000 no namoy aina. Mbola eo am-pikarohana ny fanefitra sy fanafody mahomby ny manam-pahaizana hatramin’izao, raha ny fampitam-baovao fantatra.
Faritra Matsiatra Ambony : Aza avela ho tany lavitra andriana ny Kaominina Ambanivohitr’i Solila - il y a 10 heures
Finoana sy tantara : Faha 150 taona nidiran’ny finoana katolika tao Fianarantsoa - il y a 10 heures